सर्वश्रेष्ठ 24 फुट Tattoos डिजाइन आइडिया को लागि पुरुष र महिलाहरु - टैटू कला विचार
सर्वश्रेष्ठ 24 फुट ट्याटुटो डिजाइन आइडिया को लागि पुरुष र महिलाहरु
sonitattoo अगस्ट 21, 2016
हामी इन्टरनेट राउन्ड बनाउँदै पाटो ट्याटटोको यी सेटहरूलाई माया गर्न सक्दैनौं। महिलाहरु जो कि फैशन प्रेमी हुन्, उनि सार्वजनिक मा हेर्न को लागी यो टैटू डिजाइन को उपयोग गर्न सक्छन्।
तपाईं ड्राइभिङ्ग दिनको लागि एक विशेषज्ञ किराया गर्नु अघि, मान्नुको गल्ती नगर्ने व्यक्ति व्यक्तिलाई कुशल नभएसम्म तपाईं पुष्टिकरण गर्नुहुन्न। कहिलेकाँही, यो टैटू प्राप्त गर्न कोण वा ट्याटुको आकारको आधारमा मिनेट वा घण्टा लाग्न सक्छ।
पैदल फुट टैटू
हामीलाई बताउन ट्याटू को धेरै कुराहरू छन्। यो कथामा निर्भर छ कि तपाईं आफ्नो टैटू संग बताउन चाहानुहुन्छ।
सेतो फुट टैटू
यस टटू खोज्दै हुनुहुन्छ, चिन्ता नगर्नुहोस् किनकि त्यहाँ तपाईंको ड्राइंग संग मद्दत गर्न कसैलाई त्यहाँ छ।
प्यारा फुट टैटू
केवल तपाईंको गृहकार्य गरौं र सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको कलाकार उसले के गरिरहेको छ भनेर राम्ररी भव्य छ। यदि तपाईंको कलाकार राम्रो छ भने उसले त्यो दावी गर्दछ, त्यसपछि यो टैटू गर्न चुनौती हुनेछैन। कुनै पनि कुराले तपाईंलाई यो प्यारा टैटू कसरी प्राप्त गर्न सक्दछ।
सरल फुट टैटू
एक टैटू प्राप्त गर्ने मानिसहरू को लागी धेरै चीजहरु को लागी खुल्ला हुन्छन्। जब तपाईं यो मन पराएमा, तपाईं साढे वर्षको रूपमा बढ्न चाहनु हुन्छ। त्यो लत हो।
ठूलो फुट टैटू
ट्याट प्राप्त गर्न चाहने पहिलो कुरा मान्छेले प्रश्न सोध्नु हो। प्रश्न भनेको उनलाई असाधारण ट्याटू को लागी के अर्थ बुझ्न मद्दत गर्ने हो।
डिजाइनर फुट टैटू
टैटू एक लत छ कि फैलाउने र फैलाउने राख्छ जबसम्म तपाईंको शरीरको एक भाग हो जहाँ तपाईं यी ट्याटोसहरू तपाइँमा देख्न सक्नुहुन्न। टैटूले हामीलाई धेरै स्टोरहरू बताउन सक्छ जुन हामी चाँडै बिर्सन सक्दैनौं
सुन्दर फुट टैटू
जब तपाईं घटना वा नयाँ जीवनशैलीको साथ बाहिर आउनुको बाटो खोज्दै हुनुहुन्छ, टटू यो काम गर्ने एक तरिका हो। तपाईं राम्रो टटू प्राप्त गर्ने सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई बुझ्नु पर्ने कुराहरू छन् जुन एक लामो समयको लागि अन्तिम हुनेछ।
Hibiscus फुट टैटू
यस प्रकार ट्याटू हाम्रो हरेक दिन अनुरुप बनिएको छ कि अधिकतर मान्छे बिना गर्न सक्दैन। यदि तपाईं यस तरिका ट्याट गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले गर्नु भएको पहिलो कुरा एक असल कलाकार हो जसले तपाईंलाई डिजाइनको साथ मद्दत गर्नेछ।
ठाँउ फुट टैटू
यदि तपाइँ स्थायी टटोटको लागि जानुहुन्छ भने, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईले विशेषज्ञलाई भेट्नुहुन्छ जो तपाईले टटूको डाउको पार्नुहुनेछ। यदि तपाइँ आफ्नो रचनात्मकता आफ्नो विशेषज्ञमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने, यो तपाईंको टैटू को लागी सुन्दर रूपमा आउनुको सजिलो हुनेछ।
शीर्ष फुट Tattoos को लागि फैशन प्रेमी व्यक्ति
सकियो दिनहरू जब महिलाहरूले केवल धार्मिक प्रयोजनका लागि ट्याटोहरू पाउँछन्। आज, महिलाहरु अब टैटूहरूको प्रयोग जानकारी पास गर्न प्रयोग गर्दै छन्। छवि स्रोत
फूल फुट टैटू
यो टटूमा हेर्नुहोस्। यो कसरी देखिन्छ? तपाईं # एफटट टैटू लिन चाहानुहुन्छ? तपाईंको लागि शुभ समाचार किनभने यो धेरै लोकप्रिय भएको छ कि धेरै मानिसहरूले कथाहरू बताउन यसलाई प्रयोग गर्दैछन्। छवि स्रोत
शानदार फुट टैटू
यदि यो तपाइँको ट्याट्ट प्राप्त गर्ने पहिलो पटक हो भने, हामी सल्लाह दिन्छौँ कि तपाइँ साना सुरु गर्नुहुन्छ। फुट ट्याटूको चाला र सूक्ष्मले तिनीहरूलाई सबैभन्दा ठूलो खोजेको छ। छवि स्रोत
यो केवल महिलाहरू होइनन् जुन यो टैटूको लागि माग गर्दै छन् तर पुरुषहरूले सुन्दरताको कारण यो पहिरनलाई प्रदान गर्दछ। छवि स्रोत
स्पार्कलिंग पक्षी फुट टैटू
चौंथो खुट्टा टैटू
बटरफली फुट टैटू
हामी आफ्नो टैटू को लागी केहि चीजहरू बुझ्न चाहन्छौं। सबै ट्याटोहरू चोट लगाउँदा तपाईंलाई प्वाइन्ट ट्याट्ट पनि लगाइदिन्छ। छवि स्रोत
फुट फुट ट्याटुहरू
यद्यपि, हामी जान्दछौं कि यी टैटटोहरूको केहि भन्दा बढी पीडितहरू हामी संवेदनशील छाला, भित्री चीज, छाती र भित्तामा पाउँछौँ। बिर्सने छैन कि तपाईंको हड्डी नजिकको छाला खराब छ जब तपाई यसलाई जाँच गर्दै हुनुहुन्छ। छवि स्रोत
लवली फुट टैटू
जब तपाईं फुट टैटूबारे सोचिरहनुभएको छ, दुखाइ धेरै छैन जो कारण धेरै मानिस यसको लागि जान्छ। कारण यो हो कि तिनीहरू सधैँ नाजुक र सानो हुन्छन्। छवि स्रोत
अद्भुत फुट टैटू
त्यहाँ टाटुको दर्दलाई सम्हाल्न सक्दैन गर्नेहरूको समाधान हो। उनीहरूले सबैलाई गर्न आवश्यक छ कि एक सूखा ट्याटू बन्दूकको लागि जुन स्थानमा स्याङ्किङ्गको आवश्यकता छैन। छवि स्रोत
अधिक फुट फुटटोटो डिजाइन को लागि यहां क्लिक गर्नुहोस
पक्षी टैटूहरूतितली टैटूहरूआस्तीन टैटूहरूगर्दन टैटूहरूयुगल टैटूहरूहीरे टैटूआदिवासी टैटूहरूएंकर टैटूहरूkoi fish tattooरिप टैटूओटोपस ट्याटूआँखा टटूwatercolor टटूहृदय टटटोक्रस टैटूहात टाटाटोसछाती टैटूहरूसंगीत टैटूहरूबिल्ली ट्याटोचन्द्र टोटोटोFeather Tattooटखने टैटूसिंह टटटोहरूपुरुषहरूको लागि टैटूफूल टैटूहरूज्यामितीय ट्याटुहरूप्यारा टैटूहरूराशिफल चिन्ह ट्याटोहरूmehndi डिजाइनक्राउन टैटूहरूकमल फूल टटूप्यार टैटूचेरी खिलौना टैटूसूर्य टैटूहरूहेनना टैटूईगल ट्याटोबिस्कुट टटूदूत टैटूबहिनी टैटूहरूतीर टटूहात ट्याटोसट्याटुहरू केटीहरूको लागिगुलाब टैटूहरूकम्पास टैटूसबैभन्दा राम्रो साथी टैटूहरूअनन्तता टटूटैटू विचारहरूहात्ती टटूफिर्ता ट्याटोहरूपैट टैटू